Iimpawu zeemveliso ze-JP - i-forex enkulu ye-forex
Qala u shishino
Qala ukuThengisa ngoku
100% Ibhonasi yeDistim
Faka isicelo seKhadi leJPM
Isingeniso kwi-Training Forex
Imbali emfutshane ye-Market Forex
Kutheni i-Market Forex, kwaye ingekho amasitye okanye abanye?
Yintoni ethengiswayo kwaye njani?
Ubungakanani bemarike kunye nokuthengwa kwempahla
Izindlela ezahlukeneyo zoRhwebi lweeRhwebo
Ziziphi ixesha elifanelekileyo lokuthengisa?
Ziziphi iimbini zokuthengisa?
Imali eyenziwe njani kwi-Market Forex
Indlela yokufunda I-Forex Quote
Indlela yokufunda Isatifiketi sangaphambili - iziseko
Imiqathango ebalulekileyo ye-Forex
Umda wokungena wokulinganiselwa
I-Akhawunti ye-Akhawunti ngeAkhawunti ye-Live
I-Basic MetaTrader Imisebenzi ye-4
Iipivots kunye namakhandlela
Ukufumana amanqanaba amanani abalulekileyo
Iimviwo zeMakhandlela ezidumile
I-Candlestick Cheat Sheet - Print this
Yintoni i-Elliott Wave kwaye inceda njani?
I-5-3 Wave Pattern - Yintoni kunye nendlela yokuyifumana
Iintlobo zeThathu eziSisiseko zeMpawu ze-Wave Corrective
I-Grand Super Cycle - Ii-Waves ngaphakathi kwamaza phakathi kwamaza
Ukusetyenziswa kwesi sikhokelo kwi-Forex Trading yakho
Ezinye izinto zengozi
Ulawulo lweengozi kwiiDummies
Imbali ye-Market Forex
UkuThengiswa kweXeshaxhe kusebenza njani?
Iintlobo eziqhelekileyo zolawulo
Ziziphi iimpembelelo zokuthenga nokuthengisa?
Iglosari ye-Forex (i-Foreign Exchange) Isigama
Ikhalenda ye-Forex yezoqoqosho
Yiyiphi encinci idiphozi?
Iimali zamarhwebo ze-JP zihlawulisa kangakanani ukuqeqeshwa?
Ziziphi iimpepha ezifunekayo ukuvula i-akhawunti?
Andifumani nayiphi na imeyile egameni lam - ndingayithumela njani njengobungqina bedesi?
Ndandingazama ukungena kwaye ithi ukungena ngemvume / ukungena ngemvume / akukho nxu lumano
Ndiyixhasa njani i-akhawunti yam yorhwebo?
Ngaba ndingayifumana i-akhawunti yami ngisebenzisa iB Bitcoins?
Yiyiphi imbekiselo endiyisebenzisayo xa ndenza idiphozithi?
Iyiphi ixesha lokutshintsha idiphozithi yam yabelwe kwaye ibonakalise kwi-akhawunti yami?
Idiphozithi yam ayibonakali kwi-akhawunti yakho - yintoni ingxaki?
Ndandisanda kulandwa i-MT4, kutheni ndingakwazi ukubeka nayiphi na imisebenzi?
Ndilibale iphasiwedi yam i-portal yomthengi.
Ndilibale iphasiwedi yam yeqonga lam.
Ndicela njani ukuhoxiswa?
Iyiphi ixesha lokutshintsha ixesha lokurhoxiswa?
Kuthatha ixesha elingakanani ukuhoxiswa ukubonisa?
Ngaba ndinokurhoxisa ibhonasi?
Ngaba iiMarokethi zeJP zilawula ukusabalala / iqonga?
Umyalelo wokugqibela ophelileyo
Ngaba iiMarokethi zeJP zinika iimpawu kubaxhasi?
Ngaba iiMarokethi zeJP zithenga iimali zemali kaMandela?
Ndingaba njani i-Introducing Broker (IB)?
Ziziphi iinkalo ezahlukeneyo zeakhawunti ze-JP Markets?
Uthini umahluko phakathi kwe-ECN kunye ne-Standard akhawunti?
Ingakanani ikhomishini ye-ECN?
Kutheni na ukuyeka kwam ukulahleka / ukuthatha inzuzo kungekudala?
Iimpawu zeMakethe ze-JP zenza imali xa unika iikhosi zamahhala kunye nabaxumi bakho "banenzuzo"?
Ngubani olawula iiMakethe zeJP?
Ingakanani imali endiyenzayo xa ndibeka iX?
Ndifuna ukuqala ukurhweba kodwa andazi ukuba njani?
Ingaba kufuneka ndihlawule iiMakethe ze-JP ngeenkonzo zabo ngaphandle kotyalo-mali lwam?
Ngaba iiMarokethi zeJP ziyakuthengisa egameni lam?
Ngaba iiMakethe ze-JP zenza nayiphi na inzuzo yeerhafu kwimali endiyenzayo / ihoxise?
Ngaba imali yam ikhuselekile?
Ngema iqabane Register
UKUGQIBELA UKUKHULA NGOKUGQIBELA
Sifuna ukuba uphumelele. Ngoko sinika
zonke izixhobo ozidingayo ukwenza njalo.
Ukukhawuleza, ukubeka imali kunye nokuhoxiswa.
Azikho ixesha elide lokulinda.
Ukhuseleko luphambili yethu.
Imali yakho iphephile kwaye ikhuselekile.
Imirhumo yeZero yedipozithi yebhanki okanye ukurhoxiswa
yenziwe ngeesango lethu lokuhlawula.
Qi nisiwe &
Iimpawu zeMatriki ze-JP - uMzantsi Afrika kunye ne-Afrika enkulu ye-forex broker
Iimpawu zeMakethe ze-JP yi-global power powerhouse. Sibeka imigangatho ephakamileyo kwiinkonzo zethu kuba umgangatho ufana nje nesigqibo esisigxina ngathi kubaxhasi bethu. Sikholelwa ukuba iinkonzo zemali ezixhasayo zifuna ukuxhomekeka kwimeko yokucinga kunye nemigaqo-migaqo yemigangatho yezoshishino. Siyaqhubeka sikhula imihla ngemihla ngenxa yokuzithemba kwethu kubaxhasi bethu kuthi. Sinelayisenisi kwaye silawulwa yiBhodi leNkonzo yezeMali, eMzantsi Afrika, i-FSP 46855.
Ngokusetyenziswa kwenkqubo yokubeka esweni ngokuzenzekelayo kunye nokulawulwa kwengozi, iakhawunti yomthengi akaze avunyelwe ukuba afumane ukulinganisela okungalunganga.
Imali yentlawulo ngenxa
sifuna ukuba uphumelele
Asinakuhlawulisa nayiphi na imirhumo yebhankithi zebhanki okanye ukurhoxiswa okwenziweyo ngokusebenzisa iindlela zethu zokuhlawula. Thina ngumthengisi ongcono kakhulu, onokuthenjwa & othembekileyo.
Ngokukhawuleza kunye nokwaneleyo iindawo zokuthengisa
Ngeteknoloji ephezulu kunye nezobugcisa, iiplatifti zethu zikhawuleza kwaye zanele ukuthengiswa kwakho. Asiyi kuhlamba kwaye asiyi kuphinda sitshilo kwi-oda. Oko ufuna ukuba ufumane.
idiphozithi & ihoxise
Idiphozithi yethu ngokukhawuleza kunye nekhompyutheni yokukrazula imali ngokukhawuleza. Unokonwabela impumelelo yakho phantse. Azikho ixesha elide lokulinda.
Umbuso wokhuseleko lobugcisa
Ukhuseleko luphambili yethu. Iimali zakho zihlala zikhuselekile kuthi kwaye zigcinwe kwi-akhawunti yebhanki eyahlukeneyo njengoko kucelwe ngumlawuli wethu. Imali yakho iphephile kwaye ikhuselekile.
Ukuxhaswa kwabaThengi, enye yeyona ndawo esiyigugu kakhulu - yintoni eyenza sihluke. Ifowuni, i-imeyile okanye Xoxa nathi namhlanje. Abacebisi bethu bayakuvuyela ukukunceda nayiphi na isicelo.
Bona zonke iiNgxelo zeBlogi
Ndiyabonga kunye nempendulo kuwe kwiiklasi zoqeqesho kunye noqeqesho, ndiye ndafumana kwiiMakethe ze-JP. Bandincede ngokwenene ukufunda nokuphucula izakhono zam zorhwebo. Ukujonga emva kwimbali yam yokurhweba ndikhubekile ndawa ngamaxesha amaninzi ndingazi ukuba andiyazi nto ngeemarike ngokwalo kwaye ndiyabulela kwaye ndihloniphekile ukuthengisa kunye nomthengisi wakho kwaye ndikulindele ukuthengisa ngeJP Markets . Inqwenela yam idibene nekampani yakho.
Usuku olungileyo, Uqeqesho lwam olwamkelekileyo lwaluhle kakhulu, nangona ndakwazi kuphela ukuya kwii-2 iintsuku kuba ndihlala kude kakhulu. Kodwa ngeeseshoni zokuqeqeshwa nge-intanethi ze-JP ndingakwazi ukufunda. Ngoku ndiqhuba izicwangciso ezifunyenwe kwi-demo. Kungekudala ndiza kwenza idiphozithi yam.
Andikho izinto ezilungileyo zokuthetha ukususela ekubeni i-akhawunti yam i-JP Markets. Baye bamxhasa kakhulu ngamaxesha onke omhla. Iimpawu zeMakethe ze-JP zinika iinqabileyo zengcebiso ze-Forex kunye "nokwazi indlela" yalo mdlalo uphambili kwiklasi. Andizange ndijongane neenkampani ezamkelekileyo. Ndiyayixabisa ngokwenene lonke uncedo endafumanayo.
Ngomhla, ndifuna ukuthatha eli thuba ukubonga abasebenzi baseMatshini eMatshini emsebenzini omhle. Ngomntu onjengawe owayengenanto yokuthengisa, mbulela ukuba ndihlale ndiphefumulelwe kwaye ndikhuthazwe. Qhubeka!
Ndaqalisa ukurhweba kunye namaMakethi eJP kunyaka odlule kwaye andinalo amava amaninzi. Kulo nyaka ndaphinda ndaphinda ndonwabele ukurhweba. Xa ndirhoxisa iimali kwiiMakethe ze-JP, ndifumana imali yam imini leyo kwaye yilokho ebenza bahluke kumashishini abo. Xa ndifaka imali, iiMakethe ze-JP zidlulisela imali kwi-akhawunti yam yasebhanki kwiiyure. Ndiyathanda amashishini akwa-JP kwaye ndidlulisele abahlobo bam abane ukuba bathengise iqonga labo.
Ndiyavuya kakhulu ngoqeqesho endifumanayo. Kwandithuthukisa ukuqonda kwam ngokubalulekileyo kwi-Forex yorhwebo kwaye ndaziva ndithembele ngakumbi kwaye ndizolile usebenzisa oko ndafunda. Inkonzo endiyifumene yayingumqeqeshi ophezulu kwaye ukukhulumisana rhoqo kukukhuthaza kuba kundenza ndenze ekhaya ndize ndibe nethemba lam maMakethi njengenkampani. Iimpawu zeMatriki zeJP ziyakwamkela kwaye abasebenzi babo bazikhethele kakhulu kwaye ezinye zezona zinto zihamba phambili kwintsimi. Inkonzo endiyifumana kwi-Back office inkxaso yenzeke ngokukhawuleza. Ukurhoxiswa kunye neentlawulo zibonakaliswe ngokukhawuleza. Ndanethuba lokuthetha no-CEO u-Justin ngokwakhe kwaye kwakukuhle. Ungumuntu othobekileyo ngokwenene. UThixo uyibusise iiMakethe zeJP kunye nombono walo kwaye uThixo abusise iAfrika.
UkuThengiswa kweeNkxaso-mali zangaphandle (i-Forex) kunye neeNkontileka zoThathaka (i-CFD) zixubusha kakhulu, zithatha inqanaba eliphezulu lomngcipheko kwaye alinakufanelekela bonke abatyalo-mali. Unako ukuxhasa ukulahlekelwa kweminye okanye yonke imali yakho enotyalo-mali, ngoko ke, akufanele ucacise ngemali engenakukwazi ukuyilahleka. Kufuneka uqaphele yonke ingozi ehambelana nokurhweba kwimida.
I-Forex Education Doc
I-Copyright 2019 JP iMakethe yaseMzantsi Afrika
Sinelayisenisi kwaye silawulwa yiBhodi leNkonzo yezeMali, eMzantsi Afrika, i-FSP 46855
Indawo kaNelson Mandela, isitrato iMaude
Kumgangatho we-West tower 2
I-K2016 / 123297 / 07
© 2019 Amashishini aseJP | Wonke amalungelo agcinwe | Yadalwa ngu: Lab Lab Lampu